induction kupisa kwekugadzira | induction kupisa muchina mugadziri | induction kudziya mhinduro
induction hot forging
induction preheating copper copper rod for hot forging
Induction inotengesa shongwe yendarira yekupisa inopisa
Mukuda kwekuda kugadzirisa kuchengetedza nekubudirira, nekuderedza simba rekushandisa, nekushandisa kushandiswa panzvimbo yekudziya moto. Kuti vawedzere kubudirira, vanoda kuikisa 3 tsvimbo dzendarira panguva imwe ye 780 ° C mukati me25 seconds. Nokuda kwekuedzwa kwekushanda, isu tinongopisa imwe tsvimbo, saka chinangwa chedu ndechokupisa tsvimbo imwe chete ku 780 ° C mukati me25 seconds neine pasi pe 45 kW ye simba. Izvi zvichaita kuti kana Pfumisa 3 tsvimbo, kuti 110 kW system inosangana nezvinodiwa pakugadzira.
DW-HF-70kW Induction Kuchenesa Power Supply, inoshanda pakati pe10-50 kHz
• tsvimbo yesimbi
• Chimiro chinosungirirwa, 10 inotendeuka, D = 50mm, yakagadzirwa uye inogadzirwa ne DaWei Induction Power Technologies yechinhu ichi chakashandurwa - inokwanisa kupisa huni 3 pakupisa.
Kutya: 780 ° C
Simba: 70 kW
Nguva: 24 sec
Kakawanda: 32 kHz
DW-HF nhepfenyuro Power Supply yakanga yakabatana neDW-HF-70kw Heat Station.
Chimiro Coil chakanga chakabatanidzwa kuHuat Station.
Iyo Brass tsvimbo yakaiswa mukati meKoil.
Simba Rokugoverwa rakashandurwa.
DW-HF nhepfenyuro inoshandiswa pa 20 kW yakakwanisa kubudirira kupisa imwe tsvimbo yendarira mukati me24 seconds, iyo yakanga iri pasi peiyo 25 nguva yechipiri yaidiwa nokuda kwekuedzwa. Nhatu nhatu dzendarira dzinotarisirwa kuti dzinopisa mukati me25 seconds nemakore anenge 60 kW (3 tsvimbo ichava 3x mutoro uye 3x simba). I90 kW Induction system ichasangana nezvinodiwa nevatengi.
Induction preheating inopa:
Kurumidza kupisa maitiro
Iyo nzira yakachengeteka kupfuura moto unopisa
Technology kubudikidza nekusvibiswa, yakachena uye yakachengeteka
Categories Technologies Tags kuburitsa kuumba mhangura tsvimbo, induction hot forging, induction preheating copper, induction preheating process, induction preheating rod
Chemical reactors kudziyisa
Induction Reactor Kuchenesa